> Resource> FCP> tọghata AVCHD ka Final Cut Pro na Best Ogo
Nwere ike FCPX ibubata AVCHD faịlụ ozugbo, ma ọ bụ ha ka kwesịrị-converted mbụ? M nwere MTS faịlụ site na a Panasonic GH2 dijitalụ camcorder ndị na-na AVCHD na-grayed mgbe m na-agbalị mbubata ha.
-Travisimo Si Apple Community
Dị ka Travisimo, i nwere ike na-agba ọsọ n'ime incompatibility nke mgbe ebufe AVCHD footage ka ​​Final Cut Pro, ọbụna na ị na-esonụ na workflow. N'ezie, ị nwere ike mbubata ọ bụla videos ka FCP maka ire ụtọ edezi na-enweghị mkpa na-a geek na formats na codecs. Na Wondershare Video Converter Ultimate for Mac, ọ bụ nnọọ donable. N'okpuru ebe na-akọwa otú ime ya nzọụkwụ site nzọụkwụ. Ọ dịghị ajirija!
Nkwadebe: Free download AVCHD ka FCP Ntụgharị ikpe mbipute :.
Cheta na: Nke a AVCHD ka FCP Ntụgharị bụ cross-n'elu ikpo okwu. Ọ bụrụ na ị a Windows njirimara, i nwere ike ịgakwuru Video Ntụgharị nke na-agba na Windows 8/7 / XP / Vista. N'okpuru ebe ndu ewe Mac screenshot, dị nnọọ jide n'aka na ị download nri version.
1 Tinye gị AVCHD faịlụ
Jikọọ gị camcorder ka Mac, na mgbe ahụ ẹkedori a AVCHD ka FCP Ntụgharị Mac. Ozugbo ahụ, ihe niile e dere AVCHD faịlụ nwere ike e gosiri na nke a usoro si interface. N'oge a, i nwere ike untick na "Họrọ All" nhọrọ na dị nnọọ nne Mmetụta ihe ị chọrọ, wee pịa "Ibu Ibu" nhọrọ Ibu Ibu ha.
Atụmatụ: Nke a na usoro-enye a media nchọgharị-enyere gị aka jikwaa Obodo video, ọdịyo na downloads. Ị nwere ike ịgbakwunye gị video nchekwa n'ime Atiya na ngwa ngwa ịchọta ha mgbe e mesịrị site na ịpị.
2 Họrọ FCP dị ka mmepụta format
Mbubata MTS faịlụ ka FCP, i kwesịrị iji tọghata ya akwado formats, ya bụ DV, HDV, P2 MXF (DVCProHD), XDCAM na 2K film formats. Otú ọ dị, iji hụ na kacha mma mma, Video Converter Ultimate for Mac enye ndị ọzọ nhọrọ e wezụga nkịtị video mmepụta.
Ahazi presets maka FCP, ọkọlọtọ definition.
Native codecs dị ka ProRes, Apple Intermediate Codec maka FCP iji hụ na kacha mma n'ihi mgbe edezi na FCP.
Ọzọkwa, ọ bụrụhaala na ị chọrọ mpikota onu faịlụ a obere, ị nwekwara ike pịa gia icon iji aka kpatụ bit ọnụego, etiti ọnụego, mkpebi, wdg
3 Malite converting AVCHD ka FCP
Mgbe ị na-ahọrọ nri mmepụta format, ugbu a, dị nnọọ see tọghata bọtịnụ na ala ikike mgbachapụ AVCHD ka Final Cut Pro akakabarede. N'oge akakabarede, ị ga-ahụ a mma n'anya e mmanya na-egosi na pasent na fọdụrụ oge.
Mgbe niile conversions okokụre, dị nnọọ pịa "Open mmepụta" ke mmapụta window ịchọta converted faịlụ. Ugbu a, i nwere ike na-aga n'ihu na-egosi gị creativeness on edezi ha na Final Cut Pro ala.